Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » IiSandals Resorts: Ishumi leminyaka lokujongana neCaribbean
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeBahamas Breaking • Iindaba zeBarbados Breaking • Caribbean • Iindaba zeCuracao Breaking News • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Xanduva • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
ISandals Foundation inceda iCaribbean
Lo nyaka uphawula isikhumbuzo seminyaka eli-10 seSandals Foundation, ingalo yesisa yeeSandals neeLwandle Resorts. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, iiSandals zisebenze ngokungakhathaliyo ukuba nefuthe elihle kubomi babantu abangaphezu kwe-840,000 kwiCaribbean iphela.
ISandals Resorts International ithathe ngaphezulu kwezinto ekufuneka zenziwe kwiziqithi ezisebenza kuzo.
Ayisiyonto nje yokuqokelela kunye nokuchitha imali njengoko iiSandals zikwabophelela ukuthanda kwayo, amandla, izakhono, kunye namandla e-brand.
Isiseko seSandals sijongana nemicimbi egxile kwizihloko ezibanzi ezintathu- ezemfundo, uluntu kunye nendalo.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zizinikele kutyalo-mali oludala ifuthe elihle nelizinzileyo kwiziqithi elizibiza njengekhaya. Ngokusebenzisa iSandals Foundation, iiSandals Resorts International zivunyelwe ukuba zithathe ngaphezulu kwezinto ekufuneka zenziwe kwiziqithi ezisebenza kuzo ngokwenza iCaribbean ibe yeyona ilungileyo. Ayisiyongqokelela nje kunye nokuchitha imali. Iimbadada zikwabopha ukuthanda kwayo, amandla, izakhono, kunye namandla e-brand ukujongana nemicimbi egxile kwizihloko ezibanzi ezintathu- ezemfundo, uluntu kunye nendalo.
The Isiseko seembadada ubonelela bobabini abantwana kunye nabantu abadala ngezixhobo ezibalulekileyo ezinje ngezifundo, ubonelelo, itekhnoloji, iinkqubo zokufunda nokubhala, uqeqesho kuqeqesho, kunye noqeqesho lootitshala, ukubanceda bafezekise amandla abo. Ukuza kuthi ga ngoku, i-59,036 yeepawundi zonikezelo zinikezelwe ngezikolo ezingama-578 ezinefuthe elihle, kubandakanya neekhompyuter ezingama-2,506 ezinikelweyo; Iincwadi ezingama-274,517 zinikelwe; I-169,079 yabafundi ichaphazele; Kuqeqeshwe ootitshala abangama-2,455; kunye ne-180 yezifundo ezinikezelweyo.
KwiSandals Foundation, amalinge ayenziwa kwaye aqinisekisiwe abandakanya kwaye akhuthaze abantu ngoqeqesho lwezakhono kwaye bajongana nemicimbi entsonkothileyo yoluntu ukuqinisa uluntu. Kubekho abantu abangama-384,626 basekuhlaleni abachaphazeleke ngokwakhayo kubandakanywa abantu abangama-248,714 ngokwamalinge ezempilo; 243,127 iMilo eNkulu! Inc. Izigulana zamazinyo + iCARE, 102,150 zokudlala ezinikelwe; Iikati nezinja ezingama-4,218 zichithwe zaza zadityaniswa; kwaye iintsana ezingama-397 zaphambi kwexesha zifumana ithuba lokulwa ngoncedo ngokubanzi lweSiseko samavolontiya asekuhlaleni angama-24,215.
Njengeembadada, bathembisa ukukhulisa ulwazi ngendalo esingqongileyo, ukuphuhlisa iindlela ezifanelekileyo zolondolozo, kwaye bafundise izizukulwana ezizayo ukuba zikhathalele njani uluntu lwazo kwaye zigcine indawo ezibangqongileyo. Ngenxa yeeSandals, ulwazi ngendalo esingqongileyo lwafikelela kuma-43,871 kwatyalwa imithi eyi-12,565; Ama-turtle angama-83,304 aqanduselwe ngokukhuselekileyo; Kutyalwe iziqwenga zekorale ezingama-6,000; Iiponti ezingama-37,092 zenkunkuma eziqokelelweyo; kunye neendawo zolwandle ezi-6 ezifumana inkxaso kwiSandals Foundation.
Yonke iminikelo, nokuba yeyemali, inkonzo, okanye in-kind, 100% iya ngqo ukuxhasa iinkqubo zeSandals Foundations kunye namanyathelo enza umahluko ongapheliyo kubantu nakwiindawo zeCaribbean.
ISandals Foundation ifuna ukunceda ukuzalisekisa isithembiso sayo kuluntu lwaseCaribbean lokuphucula ubomi babantu kunye nokugcina imeko yendalo ngokutyala imali kwiiprojekthi ezizinzileyo kwezemfundo, okusingqongileyo kunye noluntu.
Iziphumo zonyulo azikho semthethweni emva kwaBantu baseZambia ...
Isikhululo senqwelomoya saseSamui sibona abakhenkethi bokuqala bamazwe aphesheya ukusukela ...
I-Uganda iya e-Dubai: nje ukuba baphume kuluhlu olubomvu lwe-COVID